Udinga imishanguzo kadokotela-yamandla we-migraine? - Imfundo Yezempilo | Septhemba 2021
Cindezela Inkampani, Imfundo Yezempilo Imfundo Yezempilo Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Umphakathi, Inkampani Izidakamizwa Vs. Umngani Umphakathi, Ukuphila Kahle Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Ezemidlalo Ezisindayo Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Inkampani, The Checkout Ezempilo Izindaba Izilwane Ezifuywayo Imfundo Yezempilo, Izindaba
Main >> Imfundo Yezempilo >> Ungakhuluma nini nodokotela wakho ngemithi kadokotela we-migraine
Ungakhuluma nini nodokotela wakho ngemithi kadokotela we-migraine
Ukudonsa, ukudonsa ubuhlungu. Ukuzwela ekukhanyeni nasemsindweni. Isicanucanu nokuhlanza. Uma ungomunye we Abantu baseMelika abayizigidi ezingama-38 ababhekana ne-migraine , uyazibona lezi zimpawu. Futhi, ungadinga incwadi kadokotela imithi ye-migraine ukusiza.
Ngubani othinta i-migraine?
Izifundo zilinganisela ukuthi phakathi kuka-10% no-13% wabantu emhlabeni wonke baphila ne-migraine. Eqinisweni, abantu baseMelika abacishe babe yizigidi ezinhlanu babona okungenani i-migraine eyodwa ngenyanga, kanti abangaphezu kwezigidi eziyi-11 bathi i-migraine ibangela ukukhubazeka okulingene kuya kokubi.
Kepha izinombolo ziyahluka kakhulu ngobudala nangokobulili. Abesifazane banamathuba aphindwe kathathu njengamadoda ukuba abe ne-migraine. Cishe u-20% wabesifazane e-U.S. Kanye no-9.7% wamadoda babhekene nekhanda elibi noma i-migraine ezinyangeni ezintathu ezedlule, ngokusho kocwaningo olwenziwe yi- Izikhungo Zase-U.S. Zokulawulwa Nokuvimbelwa Kwezifo (I-CDC). Imibiko yezinhlungu zakamuva ze-migraine zishintshile ngobudala. Isibonelo, ama-24.7% abesifazane abaneminyaka engu-18-44 ubudala babike ukuthi babhekene nekhanda elibi noma i-migraine ezinyangeni ezintathu ezedlule. Kepha phakathi kwabesifazane abaneminyaka engama-75 nangaphezulu, iphesenti labantu abane-migraine yakamuva lalingama-6.3% kuphela.
kusho ukuthini o + uhlobo lwegazi
Ngakho-ke yini umuntu one-migraine okufanele ayenze? Uma ikhanda lakho le-migraine livamile, kungaba yisikhathi sokufuna usizo lochwepheshe.
Uma unekhanda elijwayelekile, ungafinyelela ekunciphiseni izinhlungu okungaphezulu kokuphikiswa okufana ne-naproxen, iTylenol, noma i-Advil. Noma ungavele uphuze amanzi bese ulala egumbini elipholile, elimnyama, elinokuthula isikhashana. Imvamisa, lokhu akwenele ukukhipha i-migraine.
Yize lungekho ikhambi le-migraine, kunezindlela ezimbili eziphumelelayo zokwelashwa kwe-migraine ngemithi, ngokusho kweNational Institute of Neurological Disorders and Stroke e-National Institutes of Health. Indlela yokuqala ukuvimbela ukuhlaselwa yi-migraine, kanti eyesibili ukukhululeka kobuhlungu bezimpawu ze-migraine uma sekuvele ukuhlaselwa.
OKUSHIWO: Hlangana ne-Ubrelvy, umuthi omusha ovunyelwe yi-FDA olapha i-migraine
Imithi kadokotela yokuvimbela i-migraine
I-NINDS ibika ukuthi ukwelashwa kokuvikela i-migraine kubandakanya ukusetshenziswa kwezidakamizwa kanjalo nokushintsha kokuziphatha. Abantu abahlangabezana nekhanda elibuhlungu njalo be-migraine kufanele basebenzise izindlela zokuphatha ukucindezela, njengokuzivocavoca umzimba, ukuzindla, i-biofeedback, nezinye izindlela zokuphumula.
Ngokuvumelana ne Mahan chehrenama , MD, udokotela wezifo zemizwa kanye nochwepheshe we-migraine eMcLean, eVirginia, iziguli kufanele zicabangele imishanguzo yokuvimbela uma ukuhlaselwa kwazo i-migraine kuvamile (ukuhlaselwa okungaphezulu kwesine kuya kwayisithupha ngenyanga) noma kukhubaza kakhulu. Imithi yokuvikela imvamisa isuselwa kudokotela, ngaphandle kwezithasiselo ezithile ezifana ne-magnesium oxide, uthi. Lezi zidakamizwa zokuvimbela zingasiza futhi iziguli ukuthi ziphendule kangcono emithini ekhulula izinhlungu uma kwenzeka i-migraine.
Ngingalinda isikhathi esingakanani ngaphambi kokuthatha uhlelo b
Imithi yokuvimbela ithathwa nsuku zonke, noma ngabe awunakhanda. Zingafaka:
Ama-anticonvulsants, njenge I-Topamax (topiramate) noma i-valproic acid
I-Tricyclic antidepressants, efana no-Elavil ( amithole noma i-Pamelor ( nolwethu )
Abavimbela i-Beta , njengeLopressor ( metoprolol noma i-Inderal ( i-propranolol )
Ama-block block wesiteshi seCalcium, njengeCardizem ( umabhebhana noma i-Calan ( sibongile )
I-CGRP inhibitors, efana ne- Aimovig (erenumab), Ukuba namandla (galcanezumab), noma I-Ajovy (fremanezumab). UVyepti (eptinezumab) ubelokhu kuvunywe yi-FDA , kodwa ayikatholakali emakethe.
OKUSHIWO: Ingabe kufanele uthathe i-Topamax yama-migraines akho?
Imithi ye-migraine ekhipha isisu
Cishe sonke isiguli esifuna ukunakekelwa kwe-migraine sizodinga incwadi kadokotela ekhipha isisu. Le yimithi ethathwa ekuqaleni kwe-migraine ukukhipha isisu noma ukumisa ukuhlaselwa yi-migraine.
Iningi leziguli ezifuna ukunakekelwa ngokwezempilo ngokuphathwa yizinhlungu zekhanda aziphumelelanga ukuzelapha ngempumelelo nge-counter counter-prescription analgesics, kusho uDkt. Chehrenama. Ngakho-ke uma usudlulile ekukhetheni ekhemisi lakho i-Excedrin futhi ikhanda lakho namanje ngeke linyakaze, mhlawumbe yisikhathi sokucela udokotela wakho umuthi kadokotela.
umhlabeleli phezu kwekhawunta umuthi wokungezwani komzimba owozelayo
Ezinye izidakamizwa ezikhipha isisu ziqondene ne-migraine, njengama-triptan. Ama-Triptans isigaba esithandwayo sezidakamizwa. Zisebenza ngokuvuselela i-serotonin ebuchosheni, eyehlisa ukuvuvukala futhi icindezele imithambo yegazi, imise i-migraine. Ama-Triptans afaka i-Axert (almotriptan), I-Relpax ( eletriptan , Frova ( nxangibhabhi ), Ukuhamba (naratriptan), UMaxalt ( mthokozisi ), Imitrex ( umabhebhana ), futhi Zomig ( zolmitriptan ). Izidakamizwa eziningana ezintsha zisanda kuvunywa ukwelashwa okunamandla kwe-migraine: Reyvow ( lasmiditan ) kanye Ubrelvy ( ubrogepant ).
Kepha udokotela wakho angakhetha ukunikezela ngemithi yokukhipha isisu engeyona eye-migraine, njengezidakamizwa ezingezona ukuvuvukala (ama-NSAID). Uzokwazi ukukunikeza iseluleko sezokwelapha esingcono kakhulu nemithi kadokotela ngokuya ngezimpawu zakho ezithile, izintandokazi zokuphathwa kwezidakamizwa, kanye nemiphumela engemihle yemithi ye-migraine.
OKUSHIWO: Ingakanani ibuprofen ephephile ukuyithatha?
Uma isiguli sihlushwa isicanucanu noma ukuhlanza [ngesikhathi se-migraine], mancane amathuba okuthi amunce imithi yomlomo ngempumelelo futhi imvamisa izodinga ukwakheka okungewona okomlomo kwe-migraine abortive, njenge-nasal spray noma umjovo ongaphansi, kusho uDkt Chehrenama.
Ngakho-ke uma ungomunye wezigidi zabantu baseMelika abahlala ne-migraine, khuluma nodokotela wakho ngezindlela zokwelashwa.
Le mithi elwa nokucindezelwa yimithi edume kakhulu kuSingleCare ngoSepthemba
ukudla ongakudla uma unemfiva
imuphi kule mithi elandelayo into yohlelo iv?
ukudla okufanele ukugweme lapho uthatha i-metformin yama-pcos
ngicela ukufaka izinyawo zami ku-bleach
kanjani ukuqeda ukukhwehlela ebusuku